यसरी जाडोमा आफ्नो सौन्दर्यको ख्याल राख्नुहोस् – Halkhabar kura
३ माघ २०७६, शुक्रबार ०९:५१
यसरी जाडोमा आफ्नो सौन्दर्यको ख्याल राख्नुहोस्
एजेन्सी । जाडोयामको सुरुवातीसँगै छालामा विभिन्न समस्या आउन थाल्छ । विशेषगरी जाडो याममा सुख्खा हुने भएकाले छाला खस्रो हुने, फुट्ने आदि जस्ता समस्या देखा पर्छ । जाडो महिनामा छाला बिग्रनुका प्रमुख कारण भनेको चिसो हावा, पानी कम पिउनु, फलफूल र हरियो सागसब्जी धेरै कम खानु वा खाँदै नखानु, अनुहारमा क्रिम लगाउन अल्छी मान्नु, फेसियल नगर्नु, छाता नओढी हिँड्नु इत्यादि हुन् ।
साथै वाहिरी चिसो र भित्री तातोको सन्तुलन नमिल्दा पनि त्यसको प्रभाव छालामा देखिन्छ । त्यसैले जाडो मौसममा छालालाई सुरक्षित राख्न तथा अनुहारमा चमक ल्याउन आवश्यक उपायहरु अपनाउनुपर्छ।
१्र प्रसस्त पानी पिउने
२. तातोपानीले वाफ लिने । यसले बन्द भएको रोमछिद्र खुल्छ
३. मौसमी फलफुल खाने ।
४. मनतातो पानीले नुहाउने
५. जाडोयाममा प्रायः हातखुट्टा, ओठ, अनुहार र आँखामा बढी असर पर्ने भएकाले हातखुट्टामा मोइस्चाराइजरको प्रयोग गर्ने ।
६. धेरै हिटर नताप्ने। लामो समय हिटरको रापमा बस्दा त्यसले छालालाई सुख्खा बनाउँछ ।
पश्चिमा संस्कृतीको सिको गर्दै आधुनिक जीवनशैली अपनाएर स्टाइलिश देखिने चक्करमा युवतीहरूको आजकल टाइट जीन्स लगाउने फेशन चलेको छ । आफ्नो फिगर राम्रो देखिन्छ र सबैलाइ आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले टाइट जीन्स लगाउदा स्वास्थ्यलाई निकै नै हानि गरिरहेका हुन्छ । यसबारेमा सबैलाइ थाहा नहुन पनि सक्छ । पर्फेक्ट फिगरको चक्करमा क्यान्सर र हृदयघात जस्ता गम्भीर रोग निम्तिरहेका हुन्छन् ।
टाइट जीन्स लगाउँदा गर्भाशय साँघुरिन्छ र बाँझोपन हुने खतरा बढ्छ । यस्तो जीन्सले पेटलाई निकै थिच्छ र पछि गएर समस्या आउँछ । युटेरसमा संक्रमण हुन्छ र समयमै उपचार नपाइएमा ट्युबमा स्थायी ब्लकेज आउँछ र पछि गएर आमा बन्न समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन ।
टाइट जीन्स लगाउँदा महिला र पुरुष दुवैमा कम्मर र पिठ्युँसम्बन्धी समस्या पनि निम्तिन्छ । यसले गर्दा मांसपेशीमा जोड पर्छ र नितम्ब स्वतन्त्र रूपमा हल्लिन पाउँदैनन् । यसैले गर्दा महिलाहरूमा स्लिप डिस्कको पनि समस्या आउँछ ।
टाइट जीन्सका कारण गोडाका नसामा भएका भल्भ कमजोर हुन्छन् अनि नसा फैलिन थाल्छन् जसबाट गाँठो बन्छ र गोडा बाउँडिने समस्या पनि बढ्छ ।
यसले मुटुरोग पनि निम्त्याउँछ । रक्तसञ्चार रोकिने भएकाले मुटुसम्म सही मात्रामा रगत नपुगेर मुटुरोगका साथै हृदयघातको सम्भावना बढ्छ । स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्तो जीन्स लगाउँदा छालाको क्यान्सरको जोखिम निकै बढ्ने समेत बताएका छन् । एजेन्सी
Previous स्टाइलिश देखिने चक्करमा टाइट जिन्स लगाउँदा लाग्न सक्छ हैँ खतरनाक राेग, जानीराख्नुस
Next कर्णालीमा हिमपातले जनजीवन कष्टकर, गाडी र हवाई साधन दुई दिनदेखि ठप्प, टेलिफोन पनि बन्द